Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul Ayaa Si Adag Ula Hadli Doonta Caalamka RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMadaarka Cusub ee Magaalada New York Oo Qaadaya Dunida Qalabkan
Madaarka Cusub ee Magaalada New York Oo Qaadaya Dunida Qalabkan
24 / 04 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Shirkadda Diyaaradda Turkish Airlines ayaa la guddoonsiiyay qandaraasyada loogu talo galay gagida diyaaradaha ee gegada diyaaradaha ee cusub ee Istanbul. 5-6-kun-mitir-rakaab oo qaas u ah rakaabka, raaxada hudheelka 5-star ma baadi dooni doono. Qolka musqulaha ayaa yeelan doona adeegyo badan, oo ay ku jiraan qolalka jiifka, shineemo jeebka iyo qolalka qubeyska
Turkish Airlines (THY), oo ka dhigi doonta duullimaadyadii ugu ballaarnaa ee garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul ka hor furitaanka bilaha 6, waxay bilaawday dadaallo loogu tala galay rakaabka gaarka loo leeyahay ee ku yaal xarunta weyn. Wargeys Habertürk'tan Gökhan Artan sida ku xusan wararka THY, qolalka rakaabka ee gaarka loo leeyahay (Meelaha CIP Lounge) ayaa la saadaalinayaa go'aaminta shirkadaha ka qeyb galaya qandaraaska ayaa la sii daayay. Rakaabyada rakaabka ee gaarka loo leeyahay ee THY, hudheellada 5 xiddig leh ku dhawaad ​​raaxada diyaaradda ayaa seegi doona. THY's 5-6 ayaa la rajaynayaa inay leedahay kun mitir oo laba jibbaaran oo isku wareeg ah garoonka diyaaradaha.
Boqolkiiba 85 ee dhismaheeda ayaa la soo gabagabeyn doonaa iyo Turkish Airlines waxay yeelan doontaa boqolkiiba 70 boqolkiiba rakaabka rakaabka ee garoonka cusub ee Istanbul THY waxay lahaan doontaa tas-hiilaad iyo guryo waaweyn oo gaar ah. Garoonka diyaaradaha ma jiri doonaan THY rakaab ah rakaab, laakiin inta badan Term-ka waxaa isticmaali doona THY oo leh goobo gaar ah. THY's 5-6 waxaa la rajaynayaa inuu yeesho kun meel mitir murabac ah oo ku yaal garoonka diyaaradaha. THY, 29 waxaa loo furi doonaa taraafikada duulimaadkeeda Oktoobar Istanbul Madaarka Cusub kuma waayi doonto raaxada hudheelka xiddigta 5 iyada oo fikradda ah meelaha loo yaqaan 'lounges gaarka loo leeyahay' ay inta badan seegaan doonaan diyaaradda.
WAAXDA KASTAA WAA IN AY U DIYAARSATO AAD U BAAHATO
Qolka rakaabka ee gaarka loo leeyahay ee THY waxay lahaan doonaan adeegyo badan sida qolalka jiifka ee rakaabka safarka, shineemada mobilada, aagagga carruurta, cunnada Turkiga iyo cuntada caalamiga ah, qaybaha cabitaanka, maktabadda iyo qolalka qubeyska. Rakaabku waxay awood u yeelan doonaan inay ku qaataan waqti ku-meel-gaar ah kaasoo lahaan doona in kabadan kun awooda kuraasta. WAA, ayaa sidoo kale bilaabay dadaallo ku saabsan hoolalka. THY waxay shaacisay in hindiso horudhac ah la qaban doono si loo aqoonsado shirkadaha kaqeybgalaya qandaraaska dhismaha aagagga CIP Lounge Airport. Shirkadaha la weydiiyey in ay ka qayb qaataan ka-isreebreebka pre Ganacsiga ka hor ay la diiwaan qolka si loo siiyo adeegyada iibsaneyso dhismaha dalka Turkiga.
50 MILLION TL TURNOVER CONDITION WLAN BAADHAHAY
Sida ku xusan ogeysiiska qandaraaska, rabitaanka hindise-bixiyaha inuu dalbado adeegyada qandaraasku waa inuu lahaadaa ugu yaraan 50 milyan TL celcelis ahaan shantii sano ee la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay. Codsiyada hindise-bixiyeyaasha shisheeye iyo hindise-bixiyeyaasha guryaha ka shaqeeya iskaashi la yeelanaya hindise-bixiyeyaasha shisheeye lama tixgelin doono.
Kuwa raba inay noqdaan kirayste waxay leeyihiin dan weyn
29 waxay noqon doontaa xarunta duulimaadyada adduunka marka masraxa koowaad la furo bisha Oktoobar. Shirkado badan oo waaweyn iyo kuwa waa weyn ayaa raba inay booskooda qabsadaan iyagoo kireynaya meelaha ganacsiga. Wasiirka Gaadiidka Badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, 30 waxaa loo dhiibi doonaa shirkadaha bisha June, iyo habka aqbalaadda ku meel gaarka ah ee 30 wuxuu bilaaban doonaa sida August yiri. Wadahadalada u dhexeeya ManagementGA Airport Management Inc. (İGA) iyo kuwa raba inay kireystaan ​​dhul ganacsi ayaa xawaare buuxa ku socda. Si loo noqdo kireyste xarunta weyn, IGA ayaa heleysa dalabyo aad u sareeya.
Garoonka diyaaradaha ayaa ka baxaya Istanbul oo aan biyo lahayn
Shuruucda cusub ee Nidaamka Tareenka Magaalada ayaa ku qasbi doonta Degmooyinka
Dhismaha YHT wuxuu ka tagi doonaa kaararka la fuuq baxo
IZBAN ayaa ku dhufan doonta ... shaqaalaha 340 way ka tagi doonaan shaqada
Farshaxanka sawir-gacmeedka barafka ee ingiriisku wuxuu ku riyaaqaa kuwa arkaya